Sanitary Napkin ထုတ်ကုန်များ စမ်းသပ်ကိရိယာ စက်ရုံ - တရုတ် သန့်ရှင်းရေး လက်သုတ်ပဝါ ထုတ်ကုန်များ စမ်းသပ်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူများ၊
စမ်းသပ်သည့်အရာ- သန့်ရှင်းရေးသုံးလက်သုတ်ပုဝါအလွှာ၏ စုပ်ယူမှုအမြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်း DRK110 Sanitary Napkin Absorption Speed ​​Tester ကို သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါ၏ စုပ်ယူမှုအမြန်နှုန်းကို အချိန်မီသိရှိနိုင်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး သန့်ရှင်းရေးလက်သုတ်ပုဝါ၏ စုပ်ယူမှုအလွှာကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စုပ်ယူခြင်းရှိမရှိကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပါသည်။GB/T8939-2018 နှင့် အခြားစံနှုန်းများကို လိုက်နာပါ။ဘေးကင်းရေး- ဘေးကင်းရေး သင်္ကေတ- အသုံးပြုရန်အတွက် စက်ပစ္စည်းကို မဖွင့်မီ၊ လည်ပတ်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စအားလုံးကို ဖတ်ပြီး နားလည်ပါ။အရေးပေါ် ပါဝါပိတ်ခြင်း- အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် စွမ်းအားရှင်များအားလုံး...
အိမ်သာသုံးစက္ကူ ကွဲထွက်နိုင်မှု စမ်းသပ်ကိရိယာသည် စံ "GB\_T 20810-2018 အိမ်သာသုံးစက္ကူ (အိမ်သာသုံးစက္ကူ အပါအဝင်)" ကို ကိုးကား၍ တီထွင်ထားသော စမ်းသပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် အိမ်သာသုံးစက္ကူ ကွဲထွက်မှုကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။အိမ်သာသုံးစက္ကူများ ပြန့်ကျဲနေခြင်းသည် မည်မျှ လျင်မြန်စွာ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည်ကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး မြို့ပြမိလ္လာစနစ်များ သန့်စင်မှုကိုလည်း ထိခိုက်စေပါသည်။ရေတွင် အလွယ်တကူ ပြန့်ကျဲနေသော အိမ်သာသုံးစက္ကူ ထုတ်ကုန်များသည် မြို့ပြရှိ မိလ္လာများကို ကုသရာတွင် ပိုမို အထောက်အကူ ပြုပါသည်။လည်ပတ်နေတော့...
သန့်ရှင်းရေးသုံး လက်သုတ်ပဝါ စုပ်ယူမှု အမြန်နှုန်း စမ်းသပ်ကိရိယာ (Touch Screen)
စမ်းသပ်သည့်အရာ- သန့်ရှင်းရေးသုံးလက်သုတ်ပုဝါ၏ စုပ်ယူမှုအမြန်နှုန်း ၎င်းသည် သန့်ရှင်းသောလက်သုတ်ပုဝါများ၏ စုပ်ယူမှုအမြန်နှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် သန့်ရှင်းသောလက်သုတ်ပုဝါများ၏ စုပ်ယူမှုအချိန်မီခြင်းရှိမရှိကို ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု- GB/T8939-2018 စသည်တို့။ အင်္ဂါရပ်များ- 1. အရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့် ထိန်းချုပ်မှု၊ တရုတ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ကြားခံ၊ မီနူး လုပ်ဆောင်ချက်မုဒ်။2. စမ်းသပ်ချိန်ချိန်ညှိမှုအတွက် အဆင်ပြေစေသည့် စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း စမ်းသပ်ချိန်ပြသမှုတစ်ခုရှိသည်။3. standard test block ၏ မျက်နှာပြင်သည် လုပ်ငန်းစဉ်များ...
စမ်းသပ်သည့်အရာများ- တစ်ရှူးစက္ကူစက်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုးဖောက်မှု (စက်လုံးကွဲကွဲခြင်း) နှင့် ကွဲထွက်ခြင်းအညွှန်းကိန်း DRK-101 အိမ်သာသုံးစက္ကူ ကြယ်ပွင့်ကွဲခြင်းစမ်းသပ်ကိရိယာ\_ spherical bursting tester သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု (စက်လုံးပတ်ပေါက်ခြင်း) နှင့် အိမ်သာစက္ကူ၏ကွဲအက်ခြင်းအညွှန်းကို တိုင်းတာရန်အတွက် အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ 1. ဆာဗာမော်တာအသုံးပြုခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်းနှင့် တိကျသောထိန်းချုပ်မှု 2. ကြီးမားသောရောင်စုံမျက်နှာပြင် ထိတွေ့ LCD မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အချက်အလက်အမျိုးမျိုး၏အချိန်နှင့်တပြေးညီပြသခြင်း 3. တိုင်းတာခြင်းအကွာအဝေးအတွင်း 0-30N တိကျမှန်ကန်မှု...